सुनसरीमा कसले मार्ला बाजी? - २९ कार्तिक २०७४, NepalTimes
सुनसरीमा कसले मार्ला बाजी?
धरान: दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा सुनसरीका तीन निर्वाचन क्षेत्र जितेर जिल्लामा पहिलो पार्टी बनेको एमालेलाई यसपटक त्यो साख जोगाउन कठिन देखिएको छ। मंसिर २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि सुनसरीमा प्रतिनिधिसभातर्फ कांग्रेस र प्रदेशसभातर्फ वाम गठबन्धन बलियो देखिएका छन्।
कांग्रेसका जिल्ला सभापति कोइरालाले यसपटक सुनसरीमा प्रतिनिधिसभातर्फ तीन र बहुमत प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचन जित्ने दाबी गरेका छन् । यसपटक कांग्रेसले सहज रूपमा ‘लालकिल्ला’ भत्काउने उनको भनाइ छ । एमालेका जिल्ला अध्यक्ष रमेश बस्नेतले भने सुनसरीका चारवटै निर्वाचन क्षेत्रमा विजयी हासिल गरी लालकिल्ला कायम राख्ने दाबी गरे ।